TANDINDONIN-DOZA NY VOKATRA : Tsy mety voafehy ireo mpangalatra lavanila
Dokotera aorian’ny fahafatesana. Izay no azo ilazana ny fanapahan-kevitra raisin’ny Fanjakana momba ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana mahazo vahana tao ho ao ka nampirongatra ihany koa ny fitsaram-bahoaka. 26 avril 2017
Noho ny tsy fahafehezana ny asan-jiolahy, dia tandindonin-doza ny seha-pihariana lavanila amin’izao fotoana.
Manjaka ny halatra lavanila amin’ny toerana rehetra ahitana azy fa tsy ny aty amin’ny Faritra Sava sy Diana ihany. Anisan’ny loharanom-bola manana ny toerany sy ny lanjany ny lavanila ho an’ireo tantsaha ka mahasarotiny azy ireo. Tsy mitsitsy, araka izany, ireo mponina fa mamono avy hatrany raha vao misy olona tratra mangalatra lavanila. Nandritra ny Filankevitry ny Governemanta farany teo, dia hentitra ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta sy ny Filohan’ny Repoblika ny amin’ny tokony tsy maintsy handraisana ny fepetra hentitra mba hampihenana ny halatra lavanila sy ireo vono olona aterak’izany.
Amin’ny ankapobeny efa nandray ireo fepetra momba izany ireo toerana betsaka lavanila. Toy ny fampiharana ny dina saingy tsy mety hahasakana ny halatra izany. Manoloana ny firongatra ny halatra lavanila, ny fahapotehana navelan’ny rivo-doza Enawo, dia ahiana hiaka-bidy be ny lavanila amin’ny taom-piotazana amin’ity taona ity.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2465) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (912) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (213) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (114) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (110) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (97) 2 mars 2021